ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်နေသူတွေကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင် - Myannewsmedia
ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်နေသူတွေကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်
By SPACEPosted on June 28, 2019
ပရိသတ်တွေကိုဆွဲအားပြင်းပြင်း နဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ နန်းသီရိမောင်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူလေးပါ။ အမိုက်စား Body နဲ့ ပုရိသတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ သူမက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှပုံရိပ်ကလေးတွေကို သူမချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲချပြတတ်သူပါ။
ဒီတစ်ခါမှာလည်းချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် နန်းသီရိမောင် က သူမရဲ့ အရင်သဘာဝပုံလေးတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့ပြုပြင်ပြီးမှ ပိုလှလာတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မော်ဒယ်နန်းသီရိမောင် က သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုဖော်ပြလေ့ရှိသူပါ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ နန်းသီရိမောင်က သူမ ပြုပြင်ပြီးမှပိုလှလာတဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောတဲ့သူတွေကိုပြန်တုန့်ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နန်းသီရိမောင် က ” ဘာပဲပြင်ပြင်အေ ကွကိုယ် ကျေနပ်ရင်ပီးတာပဲလေ နော်..ဒီလို ပြင်ချင်တိုင်းပြင်ဖို့ အချိန်တွေရယ်၊ သတ္တိရှိဖို့လိုတယ် အဆံရှိဖို့လိုတယ်
အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံနိုင်ရတယ်သများမနာလိုအူတို အပြောအဆိုတွေ လဲ လက်ခံနိုင်ရတယ်
ကျယ်မက သဘာဝအော်ပါပဲနော် ဂုဏ်ဆာသူတွေရဲ့ ချီးပေါက် ပြိုင်တာလဲ လက်ခံပေးတတ်ရတယ်..????????????လူတိုင်းဟာ ဘယ်သူမှ PERFECT ဖြစ်တဲ့ အလှအပဆိုတာမရှိဘူးနော်..အဓိက က အော်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြင်ထားတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ကယ့်အလှ တရားက စိတ်ထား ပဲ ..စိတ်လေး ထားတတ်အောင်ထားကြပါ ..”
“မမကတော့ ကိုယ်ကျေနပ်မယ်ထင်ရင် သပပါ ပုံတွေဖော် ဒိုင်းမွန်းတေတပ် အလှထပ်ဆင်ချင် ရင် ဆင်အုံးမှာ ..စိတ်ပုတ်ဝေဖန် ဆဲဆိုတာလောက်ကတော့ ဒုန့်ကဲ ????????????ကိုယ့်မိသားစုအပေါ်မှာ မိဘအပေါ်မှာလဲ အခုထိ တာဝန်ကျေတယ် ..အခု လက်ရှိဘဝကိုလဲ အရမ်းကျေနပ်တယ်ပျော် တယ် ..ဒါပဲဟယ် ..မပြင်ရသေးတုံးကပုံလေးတွေ အရင်က သများပြောသမျှမဆွာပဲ နှိင်စားဖဲ့နိမ်သမျှ သီးခံ ခဲ့တဲ့ အခွက်နဲ့ပုံ မပြင်ခင်ကပုံတင်ပေးလိုက်တယ်နော်..နောက်ဆုံးသုံးပုံက ပြင်ဆင်ထားပြီးလှနေသော အပျိုမဂျီး ဆွာစိ ဂျမ်းဘုံပုံ ..ဘဝကို စိတ်ထားပြည့်ပြည့် ဖြတ်သန်းကြပါနော် ..သနားလို့ ” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
နန်းသီရိမောင် က သူမ ပြုပြင်ပြီး နောက် ပြောင်းလဲလာတဲ့ အပေါ် ပြော သူတွေကို ပြန်တုန့်ပြန်ပြောတဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေသိရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
Previous post Song hey kyo နဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ဖို့ Brand တစ်ချို့ စဉ်းစားနေကြ
Next post ဆောင်ဂျွန်ကီအကြောင်း သင်မသိသေးတဲ့ အချက်များ ….